Shiinaha HELLO II Soosaarida Qalinka Batroolka Batroolka Batroolka iyo Warshad | MOLONG
Miisaanka saafiga ah: wareega: 209g miisaanka guud: 345g
Cabir: 153 * 32mm, (31.5-32.5mm qeybta gacan qaadka)
Xidhmada: Qalinka tattoo batari Lithium + Xadhig awood USB ah
Midab: madow-siib-dahab ah
Qaab-dhismeedka: Bateriga lithium-ka lagu dhex-dhisay, qalinka tattoo isku-dhafan, dhexda ayaa laga furi karaa si loo beddelo qeybta sare ee baytariga lithium;
Lagu dabaqi karo: 1. Fiilooyinka USB-ga ee Android 2. Inta badan cirbadaha isku-dhafan ee suuqa ku jira (Cabbirka heerka Cheyenne) 3. Ma jiro madax lacag-bixinaysa qaabeynta, waxaad si toos ah u isticmaali kartaa madaxa taleefanka gacanta;
1. Waxyaabaha tayada leh: aluminium daawaha ah;
2. Geedi socodka: CNC isku dhafan oo xardho ganaax;
3. Isku-xirka lacag-bixinta: Isku-xirka fiilada USB-ga ee Android;
4. Awoodda baytariga: 1800mA;
3. Waqtiga lacag-bixinta: lacag-bixin degdeg ah, waxaa si buuxda loogu soo oogi karaa 1.5-2 saacadood gudahood koronto la'aan;
3. Isticmaal waqti: Xilliga wax soo saarku waa 2.0A, oo ka hooseeya 8V danab caadi ah, wuxuu si joogto ah u shaqeyn karaa in ka badan 7 saacadood, danabku wuu deggan yahay, isticmaalka goos gooska ahna waxaa loo isticmaali karaa ilaa 8 saacadood;
4. LCD soo bandhigida waxa kujira: tirinta waqtiga shaqada (tirinta saacad-daqiiqad ah) + danab soosaar laba-god ah + awooda batteriga;
5. Mashiinka: Mootada aan xudunta lahayn (9V12000 kacaan);
6. Masaafada safarka: 0-0.35mm;
7. Bilaabidda danab: iyadoo la shaqeynayo xusuusta, danab bilowga waa qiimaha danabkii ugu dambeeyay ee la xiro;
8. Xaddiga danab ee shaqada: 5-12V;
Qalabku waa qalin taatiko ah oo ay ku jiraan baytariga lithium-ka ah ee lagu dhex-dhisay, kaas oo si toos ah loo isticmaali karo iyada oo aan la hayn baal marin iyo xarig. Waxay ka kooban tahay laba qaybood: 1. Qaybta kore ee tamarta batteriga lithium 2. Qaybta hoose ee qalinka tattoo; qaybta dhexe waa la furi karaa si loo beddelo qeybta sare ee batteriga lithium, Hawlaha gaarka ah waa sida soo socota:
1. Koranto on: riix badhanka dhexe "O" badhanka 5 ilbidhiqsi si aad u daarto, ka dibna riix dheer 5 ilbidhiqsi si aad u demiso;
2. Hakad: Inta lagu jiro shaqada caadiga ah, riix gaaban "O" fure si shaqada loo joojiyo, ka dibna gaagaaban mar labaad riix si aad shaqada u sii wadato;
3. Dheellitir danab: ku hagaaji baaxadda danab adigoo riixaya furaha "+" ama "-", kuna hagaaji 0.5V mar kasta, danab ugu yar: 5V, danab ugu badan waa 12V;
4. Batariga soo bandhigid: Waxaa lagu soo bandhigaa shaashadda LCD, waxaa si buuxda loogu soo oogay 4 unug, batterigana wuxuu u baahan yahay in la buuxiyo marka unugga ugu dambeeya uu harsan yahay;
5. Lacag-bixin maalinle ah: dekedda lacag-bixinta ee dibadda ah, isticmaal fiilada USB-ga ah ee USB-ga ah oo aad ku dalacdo;
6. Dammaanadda batteriga Lithium: hal sano oo dammaanad ah, qeybta sare ee batteriga lithium si gooni ah ayaa loo gadan karaa si loogu beddelo;
1. Gelitaan: Aaladda waxaa lagu soo oogay iyadoo la raacayo USB dekedda ku shubaysa, ka dibna batteriga lithium ayaa ku kaydsan. Bateriga lagu dhex dhisay waa 3 qaybood, 600mA / gabal, batari 3.7V ah;
2. Soo Saar: Xilliga wax soosaarka waxaa lagu hagaajiyaa 2A, batariga lithium-ka wuxuu sii deynayaa keydinta korontada iyada oo la adeegsanayo furaha furaha, isla markaana wuxuu siinayaa awood mashiinka la dhisay si uu u bilaabo qalinka tattoo-ga. Baaxadda danab: (5-12V) Riix furaha "+" ama "-" si aad u bedesho xaddiga danab, 5V waa danab ugu hooseeya, 12V waa korantada ugu sarreysa, kala duwanaanshuhu waa 0.5V mar kasta;
Hore: Maqaarka Tababbarka Weyn ee jilicsan ee loo yaqaan 'Silicone Silicone' oo loogu talagalay Farshaxanka Jirka ee Farshaxanimada Cilmiga Fudud ee Dhabarka Tattoo ee Dhabarka Dhabarka ah
Xiga: 30mm Midab Gradient Qabsashada Tattoo Qabsashada
Qashinka Tattoo ee La tuuro
Qalinka Qurxinta Qurxinta
Mashiinka Qalinka Qurxinta
Qalinka Mashiinka Tattoo-ka
Qoriga Tattoo Qoriga
Qalabka Mashiinka Tattoo-ka
Qalabka Tattoo Mashiinka Joogtada ah
Tattoo Qalin Rotary
Qoriga Tattoo ee Rotary
Qalabka Mashiinka Tattoo ee Rotary
Qalinka Tattoo Joogtada ah
Qalinka Battery Tattoo
Qalabka Tattoo Qalabka Qalinka
Qalinka Mashiinka Tattoo Rotary
Mashiinka Tattoo Qalabka
Mashiinka Qalinka Tattoo
Cirbadaha Tattoo ee Tattoo
Qalinka Mashiinka Tattoo-la'aanta
Qalinkii Tattoo Battery Thunderbolt II Lithium
Mashiinka Qalinka Tattoo Splendor Tattoo, 22 * ​​25 Mooto aan Xad Laheyn
Qalitaanka Tattoo Battery Trident II Lithium
Hillaaca II Lithium Battery Tattoo Pen
Qalinkii Tattoo Battery Storm II